Tartan isboorti oo lagu soo gabo gabeeyay degmada Shangaani “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tartan isboorti oo lagu soo gabo gabeeyay degmada Shangaani “SAWIRRO”
Tartan Isboorti oo ku saabsan isdhexgalka bulshada oo 22-kii November ee bishii la soo dhaafay ka furmay degmada Shangaani oo loo qabtay ilaa iyo 12-koox oo laga soo kala xulay Waaxyaha ay degmadu ka koobantahay ayaa shalay lagu soo gabo gabeeyay xarunta degmadaasi.
Maryan Badal Xasan oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Shangaani oo munaasabadda xiritaanka hadal kooban ka jeedisay ayaa sheegtay in tartankan ay ugu talagaleen isdhexgalka bulshada, waxaana ay tilmaamtay inay sii wadayaan tartamada nuucaani oo kale ah.
Guddoomiyaha degmada Shangaani Saciid Cabdiqaadir Saciid oo soo xiray tartanka Isboorti ayaa sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin qabsoomidda tartankan, waxaana uu uga mahadceliyay dhalinyaradii tartanka ka qeyb gashay sida ay u muujiyeen xilkasnimo.
“12-ka koox ee ka qeyb galay tartankan, afar ka mid ah waxa ay ahaayeen dhalinyaro yar yar, halka inta hartayna ay ahaayeen dhalinyaro waa weyn, kuwaasi oo laga soo kala xulay afarta Waax ee kala ah, Howd, Mooyaale, Jabuuti iyo Midnimo, waxaana tartanka isboorti ku guuleystay dhalinyarii ku cayaareysay magaca Jabuuti” ayuu yiri Guddoomiyaha Degmada Shangaani.
Xarumihii dowladda ee Dhuusamareeb oo la dayactirayo
Saddex arday oo deeq waxbarasho loogu diray Sudan “SAWIRRO”